Izindaba - Yiziphi izinzuzo zezitsha zokupakisha ingilazi?
Yiziphi izinzuzo zezitsha zokufaka ingilazi?
Iziqukathi zokupakisha zengilazi zenziwe ngengilazi echotshoziwe, umlotha wesoda, i-ammonium nitrate, isihlabathi se-carbonate ne-quartz kanye nezinto ezingavuthiwe ezingaphezu kweshumi nambili, futhi ngemuva kwama-degrees angaphezu kuka-1600 okushisa okuphezulu ukuncibilika kanye nepulasitiki nezinye izinqubo ezenziwe ngesitsha, futhi esekelwe isikhunta ukwenza bobunjwa ezahlukene amabhodlela ingilazi, ezifana amabhodlela iwayini, amabhodlela isiphuzo, amabhodlela pickles, amabhodlela uju kanye canning izimbiza nezinye izinhlobo ingilazi amabhodlela.
Amabhodlela engilazi avaliwe futhi adlulisa ukukhanya futhi angagcinwa isikhathi eside njengomkhiqizo ozwela umswakama. Ngakho yiziphi izinzuzo zezitsha zokupakisha ingilazi? Ake sibheke okulandelayo.
I-1, yezinto zengilazi iyisivimbelo esihle sokusebenza, iyakwazi ukuvimba umoya-mpilo namanye amagesi kwezinye zezinto eziqukethwe ukuguguleka, futhi iyakwazi nokuvimbela ukuguquguquka kwegesi okuguquguqukayo.
2, amabhodlela engilazi angasetshenziswa ngokuphindaphindiwe, ngaleyo ndlela asindise izinsiza futhi anciphise izindleko zokupakisha.
3, ingilazi kulula ukushintsha umbala nokungafihli.
4, amabhodlela engilazi aphephile futhi ahlanzekile, anokusebenza okuhle kokugqwala kanye nokumelana nokugqwala kwe-asidi, alungele ukupakishwa kwezinto ezine-asidi.
I-5, namabhodlela engilazi nawo alungele ukukhiqizwa komugqa wokugcwalisa ozenzakalelayo, amabhodlela engilazi yasekhaya obuchwepheshe bokugcwalisa okuzenzakalelayo kanye nokudlala kwemishini kuyavuthwa kancane kancane, ukusetshenziswa kwamabhodlela engilazi ukupakisha iziphuzo zejusi yezithelo nemifino ezweni. is futhi inezinzuzo ezithile.